टाउको दुख्छ र चक्कर लागिरहन्छ ? तपाईंलाई मुटुको समस्या पनि हुनसक्छ ! – Etajakhabar
टाउको दुख्छ र चक्कर लागिरहन्छ ? तपाईंलाई मुटुको समस्या पनि हुनसक्छ !
ताजा खबर :- मुटुमा समस्या पर्दा विभिन्न लक्षण देखिन सक्छ । कतिपय लक्षण सामान्य लाग्ने खालका हुन्छन् र अधिकांश मानिसले मुटुको समस्या नै होइन भन्ने ठान्छन् । झुक्याउने खालका यस्ता लक्षणले एक्कासि गम्भीर समस्या पारिदिन सक्छ । एउटा यस्तै समस्या हो, टाउको दुख्नु वा चक्कर लाग्नु । मुटुमा समस्या भएर टाउको दुख्ने या चक्कर लाग्ने हुन सक्छ । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी भन्छन्ः
रक्तचाप बढ्दा वा घट्दा टाउको दुख्ने वा चक्कर लाग्ने हुन्छ । रक्तचापको सम्बन्ध मुटुसँग जोडिएको हुन्छ । रक्तचाप बढ्दा मात्रै चक्कर लाग्ने तथा मुटुमा समस्या हुने गर्छ भन्ने धेरैको बुझाइ हुन्छ । तर, रक्तचाप घट्दा पनि मुटुमा समस्या हुन सक्छ ।
मुटुको धड्कन धेरै ढिला भयो भने पनि चक्कर लाग्ने हुन्छ । प्रतिमिनेट ६० देखि एक सयपटकसम्म धड्किनुपर्ने मुटु प्रतिमिनेट ४५ पटकभन्दा कम धड्कियो भने टाउको दुखेर चक्कर लाग्छ । मुटुको धड्कनको गति योभन्दा पनि कम भयो भने बेहोससमेत हुन सक्छ ।
मुटुको धड्कन घटेर चक्कर लाग्नुका पछाडि गम्भीर कारण लुकेको हुन्छ । मुटु ब्लक नै भएको अवस्थामा यस्तो लक्षण देखिन्छ ।
टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुनेजस्ता लक्षण देखापरेमा रक्तचाप र इसिजी परीक्षण गराउनुपर्छ । वेलैमा सजग नहुँदा गम्भीर दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ ।
मुटुले शरीरका विभिन्न अंगमा रगतको साथमा अक्सिजन, ग्लुकोज र पोषण तत्वहरूको आपूर्ति गर्छ । शरीरका लागि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकिए सबैभन्दा पहिले दिमागमा असर पर्छ । ५ मिनेटसम्म दिमागमा अक्सिजन र ग्लुकोजको आपूर्ति बन्द भए दिमागको मृत्यु नै हुन्छ । विचार गर्नुहोस्, एकपटक दिमाग मरेपछि फेरि ब्युँताउन गाह्रो हुन्छ । यसकारण मुटुमा समस्या परेको लक्षण देखिनासाथ उपचारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ पत्रिकाबाट ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २०, २०७३ समय: ६:२७:५८